श्रीकृष्णको डुब्लिकेट प्रकाश र गीता प्रेममा? श्वेता दोस्रो बिहे बारे बोले प्रकाश, दुर्गेशले गरे अफर – Onlines Time
December 27, 2020 December 27, 2020 onlinestimeLeaveaComment on श्रीकृष्णको डुब्लिकेट प्रकाश र गीता प्रेममा? श्वेता दोस्रो बिहे बारे बोले प्रकाश, दुर्गेशले गरे अफर
२०७२ सालमा संविधान जारी भएसँगै नाकाबन्दीका रूपमा भारतले गरेको ठाडो हस्तक्षेप र त्यसबाट नेपालसँगको सम्बन्धमा आएको ‘चिसोपन’ दिल्लीको संस्थापनदेखि राजनीतिक नेतृत्व र खुफिया संयन्त्रका लागि समेत निकै बोझिलो बन्यो । यही कारण भाजपा र उसको माउ संस्था राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को एउटा तप्काको चिन्ता नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दा २०७२ को भन्दा ठूलो क्षति हुने आकलन पाउन सकिन्छ । त्यही भएर नै ओलीले प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्नुअघि नै भारतले उनीसँग नयाँ शिराबाट सम्बन्ध अगाडि बढाउने पहल सुरु गरेको थियो । तर, २०७५ भदौमा बिमस्टेक सम्मेलनका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी काठमाडौं उत्रिएपछि नयाँ चित्र देखियो । सम्मेलनमा मोदीले बिमस्टेक मुलुकहरूको सैन्य अभ्यास भारतको पुनामा हुने घोषणा गरेकामा नेपालले त्यसमा सहभागी नहुने निर्णय गर्‍यो । ‘चीनको इसारामा नेपालले निर्णय लिएको’ ठानेको दिल्लीले उक्त निर्णयलाई स्वाभाविक रूपमा लिएन । कतिपय भारतीय मिडियाले यो निर्णयलाई ‘ओली सरकारको भारतलाई झापड’ भनेर अथ्र्याए ।
ओलीसँग सम्बन्ध अगाडि बढाउन दिल्ली उचित मौकाको पर्खाइमा थियो । ओलीले बीआरआईअन्तर्गतको चिनियाँ परियोजना टुंग्याउन आलटाल गरेको र उनी अमेरिकी सहयोगको एमसीसी परियोजनाको पक्षमा रहेको ठम्याइ चीनको थियो । त्यसमाथि चिनियाँ राजदूत हाउले गत असारको एउटा भेटमा ‘पार्टी फुटाउनुभन्दा बरु प्रधानमन्त्री पद छाड्न’ आग्रह गरेपछि ओली चीनबाट टाढिँदै गए । यी परिघटनालाई सूक्ष्म ढंगले केलाइरहेको र उचित मौकाको पर्खाइमा रहेको भारतले ओलीबाट दिल्लीसँग सम्पर्क विस्तार गर्ने प्रस्तावलाई सहजै स्वीकार गर्‍यो । मोदीको विशेष दूतका रूपमा ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयललाई ओलीसँग गोप्य मन्त्रणा गर्न काठमाडौं पठायो । गोयलको भ्रमणको केही सातामै भारतीय स्थलसेना प्रमुख मनोजमुकुन्द नरवणे काठमाडौं पुगे । त्यतिमात्र होइन, बालुवाटारकै विशेष आग्रहमा भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाले पनि काठमाडौं ओर्लिए । दिल्लीबाट भएका यी उच्चस्तरीय भ्रमणले नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद फेरि चर्कियो । भारतका लागि भने नेकपाभित्रको विवाद चर्किनु आफैंमा सुखद घटना थियो । त्यसमाथि गोयलको गोप्य भ्रमणसँगै ओलीले प्रयोग गर्दै आएको राष्ट्रवादको सूचकांक क्रमश: ओरालो लाग्न थाल्यो ।